Trends & Insights - Page2of5- Global Connect Asia - Trends & Insights
Odoo CRM အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
Odoo CRM ၏ အကျိုးရလာဒ်များ
• Fully integrated with other apps
အခြား app များနှင့် တွဲ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
• Flexible to all businesses
CRM သည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး
Latmat.com.mm (Online Event Ticketing Platform)
Latmat.com.mm (Online Event Ticketing Platform) ကိုအသုံးပြု၍ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း။
အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် Event စီစဉ်သူတွေအနေနဲ့ မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စိတ်ကူးထားပါသလဲ?
ERP ဆိုတာကတော့ Enterprise Resource Planning System ပါ။
SAP, Sage, Microsoft Dynamics, NETSUITE, Odoo စတဲ့ လူသုံးများတဲ့ ERP Solution တွေရှိပါတယ်။ ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့
ERP ဆိုတာ ဘာလဲ?
ERP systemဆိုတာကတော့ Enterprise Resource Planning ကိုခေါ်တာပါ။ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ခန့်ခွဲထားသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
What is ERP? It means enterprise resource planning, which itself means planning the resources in an enterprise (business). So, this abbreviation simply means, that this isaway of using the resources inacompany more effectively.
Do you know what the biggest headache forabusiness owner is? – A large-scale event on the horizon. Organizing for an event requires not only resources but also
We are pleased to announce that through collecting your feedback for Judgify and gaining extensive experience in the event industry, we have launched three new award plans
We are thrilled to announce that Global Connect Asia (GCA) powered the Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) ICT SUMMIT 2016 in Yangon, Myanmar from the 14th to 16th of November.